रोचक खबर – Page3– rastriyakhabar.com
काठमाडौँ । सबै पुरुषले महिलालाई बुझ्न नसक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । उनीहरुले एकदमै गोप्य राख्ने केहि कुराहरु हुन्छन् । केही यस्ता कुराहरु छन् जुन महिलाले सधै गोप्य राख्ने गरेको पाइएको छ । १. एक महिलाले अर्की महिलाको डाहा गर्दछन् रिस गर्दछन् तर पुरुषलाई यो थाहा हुँदैनकी एक महिलाले अर्की महिलालाई मन..
यौनका विषयमा यस देशमा सरकारले जारी गर्यो अनौठो निर्देशन
एजेन्सी। विश्वभर महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नियन्त्रणका लागि अहिले विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरिरहेका छन् । प्राय देशहरुले आफ्ना नागरिकका लागि विभिन्न निर्देशनहरु जारी गरिरहेका छन् । यस्तै, अष्ट्रेलियाले पनि कोरोना नियान्त्रणका लागि आफ्ना नागरिकाका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड तथा..
एजेन्सी। सेक्सले शारीरिक सुख प्रदान गर्ने र सृष्टिलाई निरन्तरता दिने काम गर्छ । तर, यसले मानिसलाई स्वस्थ र दीर्घायु बनाउन पनि सहयोग गर्छ भन्ने विभिन्न sexअनुसन्धानले देखाएको छ । यस्ता छन् सेक्सका फाइदा राम्रो एक्सरसाइज: सेक्स शारीरिक क्रिया हो । सेक्सका क्रममा मानिसको शरीरमा व्यायाम गर्दाजस्तै..
एजेन्सी । मौसम परिवर्तनसँगै मानिसको मानसिकता पनि बदलिन्छ । बैवाहिक जीवनमा पनि मौसमले बदलाब ल्याउने अध्ययनले देखाएका छन् । जाडो याममा मानिसको सेक्स चाहना गर्मीको भन्दा बढि रहने हुनाले रोमाञ्चक बनाउन यि उपाय अपनाउन सके सेक्स जाडोको अचुक औषधि बन्न सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । – आफ्नो कपडाको..
काठमाडौं। नेपाली समाजमा सेक्सलाई अझै पनि नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ। प्राकृतिक प्रक्रिया मानिएको सेक्सका बारेमा नेपाली समाजमा खुलेर बहस भने कमै मात्रामा हुने गर्दछ। जीवित प्राणीको जिवन सेक्ससँग जोडिएको छ तर पनि नेपालीहरुलाई सेक्सका विषयलाई बाहिर ल्याउनै चाहँदैनन्। कानुनले खुल्ला..
धेरै महिलाहरुले आँफुलाई जिरो फिगरमा ढाल्न खोजिरहेका हुन्छन् । तर मोडल अलेग्रा कोलले भने आफ्ना ठूला स्तनका कारण करोडौँ रुपैयाँ आर्जन गरिरहेकी छिन् । अमेरिकाकी चर्चित मोडल अलेग्रा ठूला स्तनकै कारण चर्चित छिन् । उनले देख्ने जोकोही हेरेको हेर्यै गर्छन् । मोडलको ब्रेस्टको साइज ५४ इन्च छ । कार्टुनको..
ओबामाको हाई स्कूलको जर्सीको मूल्य कति, बिक्रीमा विश्व रेकर्ड
सोमवार, मंसिर २२, २०७७ मा प्रकाशित
एजेन्सी । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको हाई स्कूलमा बास्केटबल खेलमा लगाएको जर्सीको बिक्रीले विश्व रेकर्ड कायम गरेको छ । सन् १९७९ हवाईको पुनाहौं स्कूलमा बास्केटबल खेलमा लगाएको उनको जर्सी लिलामीमा १ लाख ९२ हजार डलरमा बिक्री भएको छ । लिलामीमा बिक्री भएको उक्त जर्सीका लागि अहिलेसम्मको..
काठमाडौं । तपाई, हामी सबैलाई सुगन्धित फूलहरू मन पर्छ । राम्रो सुगन्धको फूलले तपाईंको सम्पूर्ण घरमा एक आरामदायक वातावरण दिन सक्छ । फूलहरू तपाईंको स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हो । प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नै बगैचा बनाउन सक्दैन । तसर्थ, हामी तपाईंलाई केहि तरिकाहरू बताउँछौं जसद्वारा तपाईं आफ्नै बोट..
काठमाडौं । सामान्यतयाः मानिसहरू कसैलाई पेच पर्नेगरी भन्नुपर्यो भने भन्छन् कि पैसा रूखहरूमा फल्दैन् ? तर यदि हामीले तपाईंलाई रूखहरूमा पैसा फल्छ भन्यौँ भने तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ ? वास्तुशास्त्रमा त्यस्ता रूख र बोटहरू बताइएको छ, जसले घरमा पैसा बढाउन सहयोग गर्छन । हो, शास्त्रमा त्यस्ता रूख र..
एउटै औँठीको मूल्य ३३ करोड रुपैयाँ !
एजेन्सी । हिरा जडिएको औँठी पाए कसलाई मन नपर्ला र ? तर, एउटा औँठीको मूल्यले विश्व रेकर्ड बनायो भने त्यो औँठी कसलाई हेर्न मन नलाग्ला ? यस्तै भएको छ जेनेभामा । बुधबार जेनेभामा एउटा औँठी करिब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । उक्त लिलामीमा प्याजी रंगको हिरा जडिएको उक्त औँठी २ दशमलव ७७ मिलियन डलरमा..
काठमाडौं। संसारकै सबैभन्दा ठूला अय्याशको रुपमा परिचित इन्स्टाग्रामका राजा कहलिने अमेरिकी जुवाडे ड्यान बिल्जारियन टाट पल्टिने संघारमा पुगेका छन् । उनको व्यवसाय निकै ठूलो नोक्सानीसँग जुधिरहेको छ । उनको सम्पत्ति, मोजमस्ती र खर्चको चर्चा र यससम्बन्धी रोचक घटनाहरु विश्वभरी प्रख्यात छन् । फोर्ब्सको..
एजेन्सी । पृथ्वीमा लाखौं जीव जन्तुहरु छन । सबैका आ–आफ्नै प्रजाति, बिशेषता र आकारहरु रहेका हुन्छ । जसमध्ये कुनै कुनै जीव निकै विचित्र खालका पनि छन । जसलाई देखेर हामीलाई अचम्म पनि लाग्छ । यीनै मध्येको एक हो– अक्टोपस । यो जीव समुन्द्रको गहिराई देखि तटीय क्षेत्रमा बस्छ । यो जीव विहान बेलुकाको समयमा खानाको..
एजेन्सी । वैज्ञानिकहरुले मानिसको शरीरमा एक नयाँ अंग पत्ता लगाएका छन् । नेदरल्याण्डका वैज्ञानिकहरुले एक नयाँ क्यान्सरबारे खोज गरिरहेको बेला उनीहरुले घाँटीमा एक नयाँ अंग पत्ता लगाएका हुन् । खोजकर्ताहरुले मानिसको घाँटीको माथिल्लो भागमा ग्रन्थीहरुको एक समुह फेला पारेका हुन् । वैज्ञानिकहरुले..
एजेन्सी । कोरोना भाइरसका गम्भीर बिरामीको उपचार गाँजाबाट हुने सक्ने एक अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ । अमेरिकाको साउथ क्यारोलिना विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले गरेको गाँजाका तीनवटा अध्ययनबाट यस्तो तथ्य खुलेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । तीनवटै अध्ययनमा गाँजाको माध्यमबाट गम्भीर..